कसले बनाउँदैछ प्यानल ? :: Press Chautari ::
कसले बनाउँदैछ प्यानल ?
- प्रशान एलुङ् राई
पहिलो चोटी ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न हुन लागेको एनआरएन, अमेरिकाको चुनावी माहौल यतिबेला यहाँको वायुमण्डलिय तापक्रम भन्दा दश गुणा बढि तात्तिएको छ । संस्था स्थापना भएको लगभग आठ बर्षपछि एनआरएन अमेरिकामा यसप्रकारको सरगर्मी बढनुलाई अत्यन्त सकरात्मक मान्नु पर्छ । तर जारी एनआरएनको चुनावी प्रक्रिया प्रक्रियागत रुपमा सञ्चालन भईरहेको बेला बिभिन्न राजनैतिक, क्षेत्रीय र जातीय गुट उप-गुट बन्नुले निर्वाचन पछिको परिणाम के सबैलाई स्वीकार्य होला र ? जुन व्यक्ति र संस्थाको टाउको राखेर बजारमा बिभिन्न गुट र प्यानलको हल्ला चलेको छ तिनैबाट औपाचारिक रुपमा खण्डन आईसकेपछि केहि यक्ष प्रश्नहरु सबैको अगाडि पहाड बनेर उभिएको छ:
“कसले बनाउँदैछ प्यानल ?”
“को हो त्यो एनआरएन, अमेरिकामा राजनीतिक, जातिय र क्षेत्रिय भागबण्डा लगाउँने ?
यी प्रश्नहरु बजारीय हल्ला मात्र होइनन् । न त यो चोक र गल्लीहरुमा चियाको चुस्कीसँगै चुरोटको धुँवा उडाउँदै गरिने बकम्फुसे कहानी हो । प्रश्न सामान्य हो तर यसले दीर्घकालिन असर कसलाई पर्छ ? भोलीका दिनमा यसले पार्ने सामाजिक असहिष्णुताको जिम्मेवार को बन्ने ? यसले प्रवासी नेपालीहरुमा ल्याउने ध्रुवीकरणको जवाफदेहिता को सँग छ ? प्रश्नमाथि उब्जिएका थप प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने बेला यहि हो ।
यसै सन्दर्भमा एनआरएन अमेरिकाको जारी निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासीद्धय खगेन्द्र क्षेत्री र शिव कुमार राईले यसअघि छुट्टाछुट्टै वक्तव्य निकालेर आफुहरुको कुनै प्यानल र समूह नबनाएको स्पष्टोक्ती दिएकाछन् । क्षेत्रीले यसअघि सार्वजानिक गरेको वक्तव्यमा आफ्नो स्वीकृति बिना निमार्ण गरिएको प्यानलबाट कोहि भ्रमीत नहुन आग्रह गरेकाछन् । यसैगरी अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी शिब कुमार राईले पनि आफु कुनै समूह र प्यानलमा नरहेको वक्तव्य मार्फत जनाएकाछन् । आफ्नो नाम राखेर बजारमा बनेका बिभिन्न प्यानलको पछि नलागेर स्वेच्छाले योग्य उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न समेत राईले बताएकाछन् ।
एनआरएन, अमेरिकालाई बिशुद्ध नेपालीहरुको हितमा काम गर्ने संस्था बनाउने लक्ष्यमा लागि परेका क्षेत्री र राई लगायत अन्य पदका प्रत्यासीहरु यत्तिबेला बिभिन्न प्यानल राखिएकाछन् । कैयौं उम्मेद्वारहरु आफु कुन प्यानल र समूहमा छन यसको हेक्का समेत उनीहरु स्वयम्लाई छैन ।
उम्मेद्वारको टाउको राखेर मात्र होइन यत्तिबेला अमेरिकामा रहेका बिभिन्न राजनैतिक र जातिय संगठनका नाममा समेत बिभिन्न प्यानल बनाएर मतदाताहरुलाई भ्रमित बनाएको देखिन्छ । यसअघि नेपाली जन सम्पर्क समितिका संयोजक बिष्णु सुवेदी र प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाले आफु संलग्न संस्थाको कुनै पनि प्यानल नभएको औपचारिक जानकारी गराईसकेकाछन् । यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिफ्ना) ले पनि शुक्रबार एक विज्ञाप्ती जारी गरी एनआरएन अमेरिकामा फिफ्नाको नाम जोडेर प्यानल निमार्ण गरिएको भन्ने गलत र भ्रामक समाचार रहेकोे बताएकोछ । सबै मतदाताहरुलाई स्वातन्त्र रुपमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै राजनैतिक, जातिय र बर्गिय स्वार्थ नराखेर एनआरएनहरुकै हितमा काम गर्ने सक्षम र योग्य उम्मेदवारलाई भोट दिन समेत फिफ्नाले विज्ञाप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ ।
आखिर को हो त यस्ता प्यानल बनाउँने ?
प्रश्न फेरी दोहोरिन्छ ।
यत्तिबेला बिभिन्न व्यक्ति र संस्थाको टाउको जोडेर बिभिन्न प्यानल र समूह बनाउदा मतदाताहरुमा ठूलो भ्रम सिर्जना हुने जनगुनासो बढ्दो छ । यसले समाजमा बिग्रह ल्याउने निश्चित् प्रायः छ । प्यानल निमार्ण गरेर मतदाताहरुलाई दिग्भ्रमीत बनाउने यस्ता तत्वहरु कुन स्वार्थले सल्बलाएका छन् ? दूलो भित्र लुकेर अर्काको टाउको जुधाउँने खेलमा समग्र एनआरएनहरुमा बिभाजन ल्याउने कार्य किन बढ्दो छ ? जवाफ आफै भित्र खोजौं । यस्ता विखण्डनवादीहरुलाई परास्त गरौं । अन्यथा बाँकी पुस्ताले धिक्कार्ने छ । बर्तमान हाम्रो हो, भावी पुस्तालाई महँगो पर्न सक्छ आजको साँवा-ब्याँज ।
सबैमा चेतना होस् ।
शनिवार, २०७१ जेष्ठ २४ गते २०:५१ / Saturday, Jun 07, 2014 8:51 pm